Twin Spin Deluxe ™ ngu NetEnt yenye Best Slots Bonus game ekhoyo ukuze yokungcakaza online. It luza Twin ukugcina uphawu emangalisayo kunye Cluster Umvuzo inkqubo ungafumana abadlali abamkela yakha of kangangoko 1,000x bawadibanise esifakelwe. Funda okungakumbi ngale slot umdla online ngokufunda ngokutsha ngezantsi.
Qala Ukudlala The Best Slots Bonus Game Nge Token Isixa
Fumana online namhlanje uze ubhalise indawo yokudlala eyaziwayo ukuba ukuvula i-akhawunti lokudlala uze wenze needipozithi yakho ukubheja. Twin Spin Deluxe ™ iyazingca njengomnye Best Slots iBhonasi lokhona ngenxa nezimo. izikhonkwane Low yokungcakaza nabaqhubi intanethi Ungathatha ingqalelo ukuba yinto eliphantsi ukubheja sum.
Nge nje 10p ungaqala ukudlala lo 6 umdlalo esondweni. Kwelinye icala, abadlali ungabeka xaxa njengoba phezulu £ 100 ukuba ukhetha. Akukho paylines kule slot, kuba lixhomekeke Cluster Umvuzo inkqubo endaweni. Kufuneka ukwenza ezisebenzisanayo icon ezifanayo kunye ekwazi ezikufutshane ukuze bakwazi ukwakha win cluster. Isimboli on show ziquka A, J, K kunye Q kwakunye 7s ebomvu, imigoqo, iintsimbi, cherries nedayimane blue.
Azuze Greater ogqiba Nge nguWele reel Iimpawu
Enye yezona zinto kwi Best Slots iBhonasi umdlalo ngeenxa i Twin reel phawu. Apha omnye esondweni ebekiweyo kuya kwandisa ukuba idibane nenye iseti emasondweni. Ubuncinane ekwazi amathathu zize ezona zininzi ekwazi ezintandathu ungakwazi zidityaniswe.
Isimboli kwi ukwandisa bayotywe ebekiweyo kuya kabini kwi kwizikhundla ezifanelekileyo kwelinye bayotywe ngokwayo. Oku kuya kunceda abadlali ukuba kubenze ngaphezulu cluster, win multipliers nokwandisa Ukubhatalwa zabo jikelele ezilindelekileyo.
Le Multipliers In The Best Slots Bonus Game ezikhoyo
Ukuba ukufumana win cluster kwi Best Slots game Bonus ekhoyo, kufuneka ube Sisihloko iimpawu ezifanayo ezilithoba. Kuba ukudlala iisimboli ikhadi, ukuba unayo Sisihloko amathathu kule mpawu, uya kufumana yakha 100x isibonda.
Kuba Sisihloko eliquka cherries amathathu okanye iintsimbi, uya kufumana yakha 250x isibonda. NeeBhari kunye 7s ebomvu iya kukwenza yakha 500x isibonda (i.e. izihloko zomdiliya 30 kuba). Isibonda wokuphindaphinda liphezulu anokuzuzwa kule slot yi 1,000x. Oku kuzuzwa igqampe Sisihloko amathathu iidayimane blue.
Kukho positives ezininzi kule slot online. Le mifanekiso zenziwa ngendlela lwekamva kwaye soundtrack kunika umdlalo a lot of energy. I-Twin ekwazi osemqoka umntu oya kukunceda lomhlaba izihloko zeesimboli ezithelekisayo rhoqo ngelixa amaqela amathathu iidayimani blue iya kukwenza i 1,000x esimangalisayo emhandzini wokuphindaphinda.